၁၄ ကြိမ်မြောက် (၂၀၂၁) တိုယိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် "ကလေးငယ်များအတွက် ပုံဆွဲပြိုင်ပွဲ" - YOYARLAY Digital Media and News
၁၄ ကြိမ်မြောက် (၂၀၂၁) တိုယိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် “ကလေးငယ်များအတွက် ပုံဆွဲပြိုင်ပွဲ”
Published: December 14, 20203:58 pm
Toyota Motor Corporation မှ ၁၄ ကြိမ်မြောက် (၂၀၂၁) တိုယိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကားအနုပညာ ပြိုင်ပွဲသည် ကမ္ဘာ့အနှံ့ရှိ အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် (၁၅) နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် ပုံဆွဲပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါသည်။
ကလေးငယ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကားများကို ရုပ်ပုံရေးဆွဲခြင်းဖြင့် အနာဂတ်ရွေ့လျားသွား လာမှုဆိုင်ရာ ၎င်းတို့၏ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေနိုင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ကလေးငယ်များအား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲအား Toyota Motor Corporation ၏ လူမှုအကျိုးပြုကနဦးဆောင်ရွက်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်မှ ဤပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မနှစ်က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့်ပြိုင်ပွဲတွင် ပန်းချီကားပေါင်း ၃၇၀၀ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် စိတ်ကူးအိပ်မက်ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲဝင်ကာလကို ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲတွင် Grand Prize ဆုရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်သည် Apple iPad 8 128GB (4G) ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင္ပြဲအေကြာင်းအေသးစိတ်အခ်က်အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုပါက အောက်ပါလင့်ခ်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင် ပါသည်။
Toyota Dream Car Art Contest Key Visual
၁၄ ကြိမ်မြောက် (၂၀၂၁) တိုယိုတာ စိတ်ကူးအိပ်မက် ကားအနုပညာပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်များ
ခေါင်းစဉ် – သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်ကား
ရည်ရွယ်ချက် – လူငယ်များအပေါ် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအား လှုံ့ဆော်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏
ကားများအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှုအား တိုက်တွန်းပေးရန်
ပြိုင်ပွဲဝင်ကာလ – ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက် မှ ၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလ (၂၅)ရက် အထိ
ပါဝင်လျှောက်ထားနိုင်သူ – အသက် (၁၅)နှစ်နှင့် (၁၅)နှစ်အောက် ကလေးများ
အသက်အပိုင်းအခြား – (၁) အသက် ၇နှစ်နှင့် ၇နှစ်အောက်
(၂) အသက် ၈နှစ်မှ ၁၁နှစ်
(၃) အသက် ၁၂နှစ်မှ ၁၅နှစ်အထိ
အနုပညာလက်ရာသတ်မှတ်ချက် စာရွက်အရွယ်အစား-၂၇၀-၃၀၀ မီလီမီတာ (၁၁-၁၂လက်မ) x ၄၂၀-၄၅၀ မီလီမီတာ (၁၆.၅ – ၁၈ လက်မ) အတွင်း
*အရွယ်အစားသည် A3 (သို့) သတင်းစာ အရွယ်အစားနှင့် တူညီပါသည်။
အနုပညာလက်ရာ လိုအပ်ချက်များ – နောက်ခံမြင်ကွင်း၊ ရှုခင်းများနှင့်အတူ
လက်ဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ကားပုံ ရောင်စုံအနုပညာလက်ရာ
ဆွဲထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ နောက်ခံရှုခင်းများလည်း ပါဝင်ရပါမည်)
ပန်းချီဆေးအမျိုးအစား -     မည်သည့်ပုံမှန်ဆေးမဆို
(ဥပမာ-ရေဆေး၊ ရောင်စုံဆော့ပင်၊ ရောင်စုံခဲတံအစရှိသည်တို့ အပါအဝင်
*Digital စနစ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော အနုပညာလက်ရာများအား
ဆုများ – အသက်အပိုင်းအခြား (၃မျိုး)၏ တစ်မျိုးစီမှ အတော်ဆုံးအနိုင်ရရှိသူ (၃) ဦးစီအား ဆုချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (စုစုပေါင်း ၉ဆု)
Grand Prize ဆုရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်သည် Apple iPad 8 128GB (4G) ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ဆုများကိုလည်း ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဒိုင်လူကြီးများ Management Representatives from:
Toyota Myanmar Sales
Toyota Aye & Sons Co., Ltd.
Toyota Mingalar Motor Co.,Ltd
Toyota GW Lion Co.,Ltd
Mr. Zay Yar Aye (Artist)
ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ဖောင်နှင့် အနုပညာလက်ရာအား online မှ Google Form (သို့) QR Code မှတဆင့် ‌ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အရောင်းပြခန်းများတွင်လည်း လာရောက်တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
Dealer: Toyota Aye and Sons
Address: 87(A), Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township, Shwegondine P.O 11201, Yangon
Telephone: (01) 400 950, (01) 502 206
Dealer: Toyota Mingalar
Address: No.6, Bayint Naung Road, Ward (2), Hlaing Township, Yangon
Telephone: (01) 514 940, (01) 514 941
Dealer: Toyota Taw Win
Address: No.68, Taw Win Road,9Mile, Mayangon Township, Yangon, Myanmar
Telephone: (09) 770552000
Dealer: Toyota GW Lion
Address: Block , Upine – 10/339, Mandalay-Pyin Oo Lwin Road, Between 37th & 39th Street, Aung Pin Lae Quarter, Pathein Gyi T/S, Mandalay Division
Telephone: (09) 969 700 001 – 3
Address: No.(L/16/157), Quarter (12), Region (16), Mandalay – Muse Pyi Htaung Su Road, Near Kho
Loung Traffic Light, Lashio.
Telephone: (09) 899944419
Dealer: Toyota Mingalar (Opening Soon)
Address: Pa / 2, Bo Gyoke Aung San Road, Pyi Taw Thar Ward, Taunggyi.
Telephone: (09) 407799993
Online Submission Google Link -> https://forms.gle/We21Hen92wMFevoFA
Online Submission QR Code
မြန်မာပြည်တွင်း ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူ TOYOTA MYANMAR SALES (TMYS)
Toyota Myanmar Sales သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်တွင် Toyota ကား များကို ဖြန့်ချိသည့် Distributor ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဆောင်ရွက်မှုများမှာ မော်တော်ယာဉ်များ၊ ပါဝင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ရေးအစိတ်အပိုင်းများ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းအပြင် ရောင်းပြီးနောက်ပိုင်း သုံးစွဲသူများဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
URL : http://mm.toyota-myanmar.com/sp-dcac-mm
Facebook : https://www.facebook.com/ToyotaMyanmar/
ဖုန်း : +959893909134 (နံနက် (၉)နာရီ – ညနေ (၅)နာရီ၊ တနင်္လာ – သောကြာ (စနေ၊တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များမှ လွဲ၍)
Previous Previous post: ခက်ခဲနေတဲ့ကလေးတွေအတွက် ပေါင် ၃၄၀၀ဖိုး ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်တွေပေးခဲ့တဲ့ ဆန်တာကလော့
Next Next post: လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းအစား လယ်သမားတွေအတွက် လှူဒါန်းငွေတောင်းခံတဲ့ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခု
OPPO ၊ PUBG MOBILE King of The Hill Offline ဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လူငယ်ကစားသမားများ အနိုင်ရရှိ
PUBG MOBILE မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ လူငယ်များ၏ Esports ဂိမ်းစွမ်းရည်များကို သိရှိခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာကစားသမားများအတွက် OPPO | PUBG MOBILE KING OF THE HILL Offline ဂိမ်းပြိုင်ပွဲကြီးကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ်…
Published: December 23, 201910:21 am Updated: 10:30 am